ကောင်းကင်ကို: God ခဏဖြစ်သွားခိုက်
Posted by Kaung Kin Ko at 1:26 PM
ရှုဒေါင့်ပေါင်းစုံ က ဘ၀တွေ မြင်သာ ထင်သာ.
God ကြီးကို လာဖတ်ပါတယ်၊
GOD တစ်ခု သိထားရမှာက အရင်တုန်းက ၂၀၀၆ နော် အခု ၂၀၀၉ အဲ့ဒီတော့ GOD ပြောတာတွေ ပြောင်းလဲ ကုန်ပြီပေါ့ဗျ..
Gtalk ကတော့ အရင်လို လိုင်းကျတာတွေ ဘာတွေ မရှိတော့ပါဘူး..
ဘာလဲ GOD က မီးလည်း အရင်လို ပျက်တယ် ထင်နေလို့လား..
အင်တာနက်တွေ မနှေးတော့ပါဘူး GOD ရဲ့
(ဝေးသွားတာ.. ကျော်ရခွရ ခရီးဝေးသွားတာ)
စာကလေးခွေရောင်းတဲ့ အဖွားကြီး.. အော်..
(ဆာလို့တဲ့ ခွေခွေလေး.. GOD ကို တမ်းတနေတယ်)
ဗျာ..... (မထူးခြားပါဘူး နေတော့ ကောင်းတယ်တဲ့)
နောက် (၃) နှစ်ကြာရင် GOD ထပ်လာမယ် ဟုတ်လား..!!
(ပို မဆိုးသွားရင် ကံကောင်းပါ GOD ရယ်)
ဟီးးဟီးးး ပြေးပြီဗျို့ :))
can't find an exact word to praise your artistic thoughts and amazing work.
ဖတ်ခဲ့ဘူးတယ်ရှင့် .. တကယ်ကောင်းတာပဲ ..
ခုပိုပြီး တိုးတက်လာတယ်မထင်ဘူးလား GOD ကြီးရယ်း)
အခုမှဖတ်ဖူးတာ... ကောင်းတယ်ဗျာ...။ GOD ကနေ DOG မဖြစ်သွားဖို့ပဲ လိုတာပါပဲဗျာ။
ကောင်းကင်ကိုကလည်း စကားအဖြစ် ပြောတာကို တစ်ကယ်ရှစ်ခိုးမယ် ထင်တာကို။
ဒီလို စကားအဖြစ်ပြောတာတွေ ယုံတုန်းပဲလား။
ကို ကောင်းကင်ကို ရဲ့ blog ကို link ဖို့ ခွင့်တောင်းပါတယ် ...။
အဲဒီ God ခဏဖြစ်သွားခိုက်ကဘာပါလိမ့်
ဒီပို့စ်လေးကို အရင်ကတည်းက ဖတ်ဖူးပါတယ်။ အခုပြန်ဖတ်တော့လည်း ကောင်းတာပါပဲ ...
ဆက်လုပ် ... ကိုကင်းကောင်ကို အဲ ... ကိုကောင်းကင်ကို ရေ .... (typo) နော် ... ဟီးဟီး
ခုမှတစ်ခါရောက်ဖူးတာ ကြိုက်တယ်ဗျို့ အရေးအသားတွေ
ခုခေတ် GOD တွေက GODအစစ် ထံမှာ ဆုတောင်းကြတယ်။ ဘဝဆက်တိုင်း မိစ္ဆာဆိုး ငရဲသားတွေ ရဲ့ ရန်မှ လွတ်ကင်းရပါစေသားတဲ့ ...